Kuwedzerwa Kwakachena PTFE namira Thread Tape - China Yangzhong Luck Star chisimbiso
Kuwedzerwa Pure PTFE namira Thread Tape
Desiccant Rotor Dehumidifier Zvisimbiso
Remagetsi hwidibiro Dosing Pumps Seal
PTFE hamvuropu CNAF Lapjoint Flange Gasket
The bushing Kubereka Taper Lock
Camshaft End zvinoriumba
OEM Graphite Vakazadzwa PTFE Ring
No-gomba PTFE hamvuropi CNAF Gasket
Description: 1.Expanded PTFE kwemajoini sealant tepi chinhu multi-chinangwa gasket tepi kugadzirwa kubva 100% rakawedzerwa PTFE fluorocarbon zvinhu. 2.It akapa sezvo kuramba pasi arambe achirema tepi aine nokuzviremekedza namira achitsigirwa zviuno. 3.It dzamutswa uye chirambe chakapfava, kubvumira kuti aenderane nyore kune zvose pamusoro hadzina kufambiswa zvakanaka uye kuti tsonyera kune nhete Ribbon zvaoma. Application: Expanded PTFE kwemajoini sealant tepi inokurudzirwa kuva gasket tepi iri simbi, magirazi mudungwe-, PVC uye Washington City Offices nenyere flanges, fume krzywa ...
1.Expanded PTFE kwemajoini sealant tepi chinhu multi-chinangwa gasket tepi kugadzirwa kubva 100% rakawedzerwa PTFE fluorocarbon zvinhu.
2.It akapa sezvo kuramba pasi arambe achirema tepi aine nokuzviremekedza namira achitsigirwa zviuno.
3.It dzamutswa uye chirambe chakapfava, kubvumira kuti aenderane nyore kune zvose pamusoro hadzina kufambiswa zvakanaka uye kuti tsonyera kune nhete Ribbon zvaoma.
Rakawedzerwa PTFE kwemajoini sealant tepi inokurudzirwa kuva gasket tepi iri simbi, magirazi mudungwe-, PVC uye Washington City Offices nenyere flanges, they fume ducts, kongiri lids, kupisa exchangers, internet girazi Akazadzisa mapurasitiki midziyo, pombi dzimba flanges, hwemvura mudziyo flanges, manhole uye manhole anofukidza, zvedongo majoini, kufefetedza ducts, hydraulic uye pneumatic hurongwa, mvura hurongwa uye turbine nyaya.
Kuwedzerwa PTFE kwemajoini tepi iri kugadzirwa kubva 100% PTFE, chinhu inert zvinhu zvinogona kushandiswa mafomu zhinji pamusoro kungatikanganisa runyararo, kunze yakaumbwa alkali nesimbi uye zvokuvamba fluorine. 24b haazorambi isva venhau uye kunogona kushandiswa mune zvokudya uye zvokushandisa zvinodhaka zvikumbiro.
Material: 100% PTFE, nyoro uye rakaisvonaka elasticity
Ukobvu: 1mm ~ 7.0mm
Upamhi: 3mm ~ 25m
ph dungwerungwe: 0-14
Pressure usanyanyoratidza: 20Mpa (kana 2900 psi, kana 200kgf / cm2)
Density:. 0,7 ~ 0.8g / cm3 (.. 43 ~ 49.5lbs / bv ft.3)
Zvinokambaira Relaxation (ASTM F38): 51%
Sealablity (ASTM F 37a): 0.1 Rine mamiririta / hr
Previous: Desiccant Rotor Dehumidifier Zvisimbiso
Namira Thread Seal Ptfe Tape
Colorful Ptfe Kuiswa chisimbiso Tape
Ptfe Pipe Kuiswa chisimbiso Tape
Ptfe Kuiswa chisimbiso Tape
Ptfe Teflon Washington City Offices Tape
Teflon Tape Ptfe Thread Chisimbiso
Thread Kuiswa chisimbiso Ptfe Tape
Glass Fiber Vakazadzwa PTFE
OEM Colorful FKM / Viton O-Ring
OEM Peek Ring Zvisimbiso
Carbon Vakazadzwa PTFE Ring
Zvikuru kupatsanurwa zvinhu zvenaironi bhaudhi uye Nut